Somaliland: Eng Deeq Axmed Ducaale Maxaa Shaqada Loogu Diiday Khaliifa Foundation U Magacawday.?? - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Eng Deeq Axmed Ducaale Maxaa Shaqada Loogu Diiday Khaliifa Foundation U...
Waxaa beryahan ay qoraysay saxaafada Somaliland warar sheegayey in shaqo uu iska hortaagay qoyska madaxtooyada oo uu ugu horeeyo safiir Baashe Cawil. Wararku waxa ay sheegayeen in Al-axbaabi oo ah masuul muddo shaqooyin ka qabtay dalka Somaliland, gaar ahaan ceelal biyoodyo iyo harooyin biyo xidheeno ah oo badan, kuwaas oo uu u fulinayey hay’adda Khaliifa Foundation oo laga leeyahay dalka Imaaraatka, ayaa u baahatay in ay xafiis iyo xarun ay leedahay ay ka Furato .Somaliland Isla markaasna waxay uu uu Wakiil tabeen in ay uu dhiiban oo uu Wakiil ka noqdo Eng Deeq Axmed Ducaale, waxaana iska hor taagay Safiir Baashe Awil
Eng Deeq Axmed waa kuma?
Eng Deeq wuxuu ka soo jeedaa qoys balaadhan oo can ka ah gobolka Togdheer, wuxuu ahaa ardaydii wax ku baratay dalka Cadan, dabadeedna u soo guurtay Somaliya xabbadi keentaydii. Muddo ka dib Deeq wuxuu qoyskoodu u guuray dalka Imaaraatka oo uu ka shaqay jiray aabihii, wuxuu ku dhamaystay waxbarashiidiisi ilaa dugisga sare iyo kulliyadeed, dawlada imaaraatka oo berigaa xiisayn jirtay dadka iyo dhalinteeda ayaa waxbarasho dibada ah u dirtay. Wuxuu soo qaatay becholar Engineering uu ka soo qaatay dalka Pakistan.
Eng Deeq wuxuu ku soo noqday dalka Imaaratka oo uu ka shaqeeyey, wuxuuna ka mid ahaa qoyska ay aad isugu dhaw yihiin Shuyuukhda dalka ka talisa. Taas oo sababtay in ay jeclaysteen Imaaraatku in ay u igmadaan in uu shaqo uga qabto Khaliifa Foundation dalka Somaliland.
Iyagoo ku kalsoon aqoontiisa iyo Kartidiisaba Waxaa se nasiib daro ah Aqoonyahankiii isku xidhi lahaa labada dal, EE ay soo xusheen imaraatku in si badheedh la isu hor taago shaqadiiisa oo waliba cid dano gaara
Lihi is Hor istaagto
Maxaa sabab looga dhigay is hortaaga?
Wararku aanu ka soo xiganay illo wareedyo aad ugu dhaw Eng Deeq waxa ay sheegayaan in sababtu tahay in safiirku ku dooday, in Eng Deeq ka soo jeedo qoyska madaxweynaha Somaliland, middaas oo aanu diidayno in ay keento dareen shacbigu naga qaato oo ah qaraabo kiil. Waxaa se aan sax ahayn in masuul in masuul isagu ku shaqaysanaya magaca qoyska uu ku takooro, muwaadiniin qodob isaga qaban waayey. Waxaa noo suurtogeli wayday in aanu wax ka waydiino dhacdadan masuuliyinta lagu eedaynayo. Annaga oo dhawr jeer isku daynay oo xidhiidh la samaynay awgeed. Hadaba arintaas oo ay aad Uga xumadeen Bulsho waynta Reer somaliland
Safiir Baashe Awil